३२ वर्षीय उनी पछिल्लो समय काल्फ समस्याका कारण घाइते हुने गरेका छन् ।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो र ज्लाटान इब्राहिमोभिक आफैले आफूलाई समर्थन गरे। तपाईं त्यो गर्नुहुन्न। तपाईं आफूलाई एक खेलाडीको रूपमा कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
उनले जबाफमा भनेका छन्,‘मान्छेहरु मेरो बारेमा कुरा गर्छन्। मलाई थाहा छ म के हो, मैले के गरें र म के दिन सक्छु तर म यो आफैँमा राख्छु। मानिसहरु आफ्नो भनाइ भन्न सक्दछन्। म आफ्नै बारेमा कुरा गर्न मन पराउँदिन, म सामूहिकको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु।’
तपाईले राडामेल फाल्काओले गलातासारायको लागि गरेको हस्ताक्षरको बारेमा के सोच्नुहुन्छ ?
ऊ धेरै गोल गर्ने एक उत्कृष्ट स्ट्राइकर हो। जहाँसुकै गए पनि उसले गोल गर्छ। ऊ आफ्नो जम्प र हेडरको साथ बक्समा शक्तिशाली खेलाडी हो, र उसले दुवै खुट्टाको साथ शूट गर्दछ। उनी एक प्रभावशाली स्ट्राइकर हुन्।
के तपाईं मिडफिल्डरका रुपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
मलाई थाहा छैन, यो कसरी जान्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। बल र मिडफिल्डसँग सम्पर्क गर्न र प्राप्त गर्न अब म प्रायः आफूलाई गहिरो पिचमो छोडिदिन्छु। मलाई थाहा छैन भविष्यमा के हुन्छ।
स्पोटर्स मिडिया मार्साले मेस्सीसँग गरेको कुराकानी